आईपीएल किन खेल्दैनन् पाकिस्तानका खेलाडी ? | Hamro Khelkud
आईपीएल किन खेल्दैनन् पाकिस्तानका खेलाडी ?
एजेन्सी – विश्व चर्चित ईन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा विश्वका सबै स्टार खेलाडीको सहभागिता रहने गर्दछ । सबै टेस्ट राष्ट्र र एसोसिएटमा नेपालबाट सन्दीप लामिछाने आईपीएल खेलिसकेका छन् ।
सन् २०१७ देखी एसोसिएट खेलाडीलाई पनि आईपीएल खेल्न बाटो खुलेको थियो । सन् २०१७ मा अफगानिस्तानका राशिद खान र मोहम्मद नावि तथा सन् २०१८ नेपालबाट सन्दीपले आईपीएलमा एसोसिएटबाट प्रतिनिधित्व गरे । अफगानिस्तान टेस्ट राष्ट्र बनिसक्दा एसोसिएट राष्ट्रबाट आईपीएल खेल्ने हाल सन्दीप एक्ला खेलाडी हुन् । सन् २००८ देखी सुरु भएको आईपीएल सन् २०१९ सम्म १२ औं संस्करण सम्म आई पुगेको छ । १२ औं संस्करणको आईपीएल आगमी मार्च २३ देखी भारतका विभिन्न शहरमा हुँदै छ ।
हालसम्म चेन्नई सुपर किंग्स र मुम्बई इन्डियन्सले समान ३-३ पटक आईपीएलको उपाधि जितेका छन् । त्यस्तै कोलकता नाईडराइड्सले २,सनराईजर्स हैदराबाद, राजस्थान रोयल्स र डेकन चार्जर्सले पनि एक-एक पटक उपाधि उचालेका छन् ।
सन् २००८ को पहिलो संस्करणको आईपीएलमा साहिद अफ्रिदी, सोहेल तनविर लगाएत ११ पाकिस्तानी खेलाडीले आईपीएल खेलेका थिए । त्यसयता कुनै पाकिस्तानका खेलाडी आईपीएल खेलेका छैनन् ।
आईपीएलमा पाकिस्तानका खेलाडीलाई खेल्न प्रतिबन्ध :
सन् २००८ को पहिलो संस्करणको आईपीएलपछि भारतीयसरकारले सबै पाकिस्तानी खेलाडीलाई आपीएल खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विश्वका सबै स्टार खेलाडी खेल्ने आईपीएलमा पाकिस्तानका खेलाडी त्यसैको कारण खेल्दैनन् । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले पनि आफ्ना खेलाडीलाई आईपीएल खेल्न रोक लगाएको छ ।
हाल पनि पाकिस्तानमा विश्वका स्टार खेलाडीको रुपमा फखार जमान, हसन अली, बाबर आजम, सोएब मालिक, सादव खान, मोहमद आमिर, शाहिद अफ्रिदी लगायत थुप्रै खेलाडी छन् । पाकिस्तानी खेलाडीलाई आईपीएल खेल्न अनुमति मिल्ने हो भने यी खेलाडी अक्सनमा करौडौं मुल्य लाग्ने र प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने क्षमता राख्दछन् ।
उमर गुल, सोहेल तनवीर र शोएब अख्तर आईपीएल खेल्दा
पाकिस्तानका खेलाडीलाई किन प्रतिबन्ध ?
सन् २००८ नोभम्बर २६ मा मुम्बईमा एक आतंकारी हमला भएको थियो । जुन हमला पाकिस्तानका ईस्लामी आतंकबादी संगठनका १० सदस्य गर्दै १ सय ६६ जनाकोे ज्यान जानेगरि मुम्बईमा हमला गरेका थिए । जसको कारण भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धमा पुन बिग्रीएपछि पाकिस्तानका खेलाडीलाई सन् २००९ मा आईपीएल खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सन् २०१० मा पाकिस्तानका खेलाडीले अक्सनमा नाम दर्ता गराएपनि कुनै पनि टिममले मुल्य लगाएनन् । त्यसपछि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डलेनै आफ्ना खेलाडी भारत नपठाउने जनाएको थियो । त्यस्तै सिमा क्षेत्रमा निरन्त देखिएको विवाद पनि पाकिस्तानका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लाग्नु अर्को कारण हो ।